आइएमई मोटर्सले बिक्री गर्ने अशोक लेलैण्ड गाडीमा सनराइजले बिनाधितो कर्जा दिने
काठमाण्डौ । आइएमई ग्रुपअन्तर्गत संचालित आइएमई मोटर्स प्रा.लि.द्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैण्ड र सनराइज बैंकबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकशर्मा पौडेलर आइएमई मोटर्सको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक सन्दिप अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताअनुरुप आइएमई मोटर्सबाट...
बजारमा नयाँ हिरो ग्ल्यामर,मूल्य कति पर्ला?
काठमाण्डौ । हिरो मोटोकर्पले नेपालमा आफ्नो उत्पादनको सूचीमा थप बढोत्तरी गरेको छ । कम्पनीले आइबिएस प्रविधिका साथ नयाँग्ल्यामर एक स्टाइलिस अवतारमा लन्च गरेको हो । युवामय एवं आधुनिक उत्पादनको सूची प्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई विस्तार गर्दै विश्वकै मोटर साइकल र स्कूटरको सबैभन्दा ठूलो निर्माता हिरो मोटोकर्पले आफ्नो लोकप्रिय मोटरसाइकल...
पूर्व चेकोस्लाभियाको ब्रान्ड जावा मोटरसाइकल नेपालमा, आधिकारिक बितरक बन्यो अग्नी मोटोइन्क
काठमाण्डौ । भारतभर फैलिएको व्यापक डिलरसिप नेटवर्कबाट आफ्ना तीन नयाँ जावा मोडलहरूले प्राप्त गरेको विशाल प्रतिक्रिया र सफलताको आधारसहित क्लासिक लेजेन्ड्स नेपाली बजारमा आफ्नो पदचिन्ह विस्तार गर्न तयार भएको छ । क्लासिक लेजेन्ड्सले अग्नि मोटोइन्क प्रा.लि.लाई नेपालका लागि आधिकारिक वितरक–साझेदारका रूपमा नियुक्त गरेको छ । यो अग्नि...
नयाँ अवतारमा आउँदैछ एमजी हेक्टर कार, कति पर्ला मूल्य ?
काठमाण्डौ । एमजी मोटर इन्डियाले छिटै आफ्नो लोकप्रिय एसयूभी एमजी हेक्टरलाई नयाँ अवतारमा लन्च गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। यो नयाँ एसयूभी भारतको गुजरात सहरस्थित सडकमा टेस्टिङका क्रममा देखा परेको थियो। यो भारतमा निकै मन पराइएको कार हा। अब कम्पनीले यो हेक्टर फेसलिफ्ट ल्याउने तयारी गरिरहेको हो। इन्जिनमा परिवर्तन हुने छैन हेक्टर...
रोयल इन्फिल्डलाई टक्कर दिन आयो होन्डाको नयाँ क्लासिक बाइक, यस्तो छ डिजाइन
काठमाण्डौ । भारतमा होन्डाका नयाँ क्लासिक बाइक लन्च गरिएको छ। होन्डा मोटरसाइकल तथा स्कुटर इन्डियाले होन्डा एच‘नेस सीबी ३५० को मिड साइज टु ह्विलर सेगमन्टमा लन्च गरेको हो। यो बाइकको सीधा टक्कर रोयल इन्फिल्डसँग हुने अनुमान गरिएको छ। यही मिड साइज क्लासिक बाइक सेगमेन्टमा रोयल इन्फिल्डको बाइक पनि निकै लोकप्रिय छ। होन्डाको यो बाइकमा...
हार्ले डेभिडसनले अब भारतमा बाइक उत्पादन नगर्ने
काठमाण्डौ । अमेरिकन बाइक निर्माता कम्पनी हार्ले डेभिडसनले भारतमा रहेको आफ्नो कारखाना बन्द गर्ने भएको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो मोटरसाइकल बजार भारतमा हार्ले डेभिडसन करिब एक दशकअघि प्रवेश गरेको थियो। कम्पनीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दक्षिण भारतको बावलमा रहेको आफ्नो कारखाना बन्द गर्न लागेको र दिल्ली नजिकमा रहेको गुरेगाँउको सेल्स...
काठमाण्डौ । नेपालका लागि सुजुकी कारको आधिकारिक बिक्रेता तथा सीजी होल्डिङ्जको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले ११ असोजदेखि सुरु हुने गरी यस दशैंतिहार भरीका लागि आकर्षक ग्राहक योजना ‘सुजुकी पर्वोत्सव अफर’ सार्वजनिक गरेको छ । यो योजनाअन्तर्गत ग्राहकले तीनलाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको नगद छुट, दुई लाख रुपैयाँसम्म एक्सचेञ्ज बोनस,...
विटारा ब्रेजा, अल्टो र वेगनआर नयाँ अवतारमा लन्च गर्दै सुजुकी, यस्ता छन् विशेषता
काठमाण्डौ । सुजुकी मोटर्सले आफ्नो तीनवटा लोकप्रिय कारका न्यु जेनेरेसन मोडल ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसमा कम्पनीका तीन लोकप्रिय कार सुजुकी विटारा ब्रेजा, सुजुकी अल्टो र सुजुकी वेगनआर ह्याचब्याक समावेश छन्। यसमध्ये नयाँ विटारा ब्रेजा जनवरी २०२१ मा लन्च हुने सम्भावना छ। कम्पनीले नयाँ विटारामा ग्लोबल सी प्लेटफर्मको प्रयोग गर्न...
स्याङयोङ्गले ल्यायो सुपर डिस्काउन्ट अफर, रु. ३ लाखसम्म छुट पाइने
काठमाण्डौ । नेपालका लागि स्याङयोङ्ग मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता एवम् आइएमएस ग्रुप अन्तर्गतको, आइएमएस मोटर्सले “स्याङयोङ्ग सुपर डिस्काउन्ट” ल्याएको छ, जहाँ ग्राहकहरूले यसअफर अन्तर्गत कोरियन लक्जरी एसयूभी, एक्सएलभीमा ३ लाख छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, ग्राहकहरुले आफ्ना पुराना सवारी टिभोली अथवा एक्सएलभीसँग एक्सचेञ्ज...
काठमाण्डौ । हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले आज सोमबार नेपालमा बहुप्रतिक्षित हस्कभर्ना ट्विन्स मोटरसाइकल लन्च गरेको छ। स्भार्टपिलेन २५० र भिटपिलेन २५० स्विडेन मूलको अग्रणी प्रिमियम मोटरसाइकल ब्रान्ड हस्कभर्ना केटीएम गु्रपको एक अंश हो। यसलाई हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले नेपालमा ल्याएको छ। कम्पनीले केटीएम ब्रान्डको...
चाडपर्वमा उपहारको बहार,हीरो मोटरसाइकल वा स्कुटर किन्दा १ जनाले रु.१ लाख पाइने
काठमाण्डौ । नेपालको लागि हीरो मोटर साइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङ्ग प्रालिले नेपालीहरुको महान चाड बडादशैं र तिहारको उपलक्ष्यमा “दशैंंको पर्व हीरोत्सवको हर्ष” भन्ने नयाँ योजना ल्याएको छ । यस योजना अन्र्तगत हीरो मोटर साइकल तथा स्कुटर किन्ने ग्राहकले रु ५ हजार पक्का डिस्काउन्ट, स्क्रयाच कार्ड मार्फत १ लाख सम्म...
सुजुकी दशैं तिहार अफर: मोटरसाईकल तथा स्कुटर खरिदमा तत्काल रु १२ हजार नगद छुट
काठमाण्डौ । सुजुकी कम्पनीको मोटरसाईकल तथा स्कुटरको नेपालका लागि आधिकारिक आयातकर्ता तथा बिक्रेता भी.जी. अटोमोवाईल्स प्रालिले आउँदै गरेको बडा दशैं, शुभ दिपावली तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी आफ्ना ग्राहकहरुका लागि सुजुकी दशै तिहार अफर प्रारम्भ गरेको छ । चाड पर्व सबैको हौसला हाम्रो भन्ने नारा लिएको यस अफर अन्तर्गत ग्राहकवर्गहरुले सुजुकी...
मारुतीको लोकप्रिय कार अल्टो अब नयाँ अवतारमा आउँदै, कुन–कुन फिचर्स थपिए ?
काठमाण्डौ । मारुती सुजुकी कम्पनीले आफ्नो लोकप्रिय कार अल्टो अब नयाँ अवतारमा लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नयाँ अल्टो सन् २०२१ लन्चमा गर्ने तयारीमा कम्पनी लागिपरेको छ। परिवर्तन हुन सक्छ डिजाइन र इन्टिरियर नयाँ सुजुकी अल्टोको डिजाइन र इन्टिरियरका विषयमा सबै कुरा सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर आशा गरिएको छ कि यो इन्ट्री लेभल ह्याचब्याक...